JobDescriptionSample.org – Page 30 – Oke collection of Job Description
Actors Job Description / Ihe aga-eme Ma ọrụ Sample
Ntụrụndụ Vehicle Service Technicians Job Description / Ọrụ Na Ibu Ọrụ Sample
ịchọpụta, elele, ịgbanwe, idozi, ma ọ bụ ime nke ugbua ntụrụndụ ugbo ala tinyere traveltrailers. Ike na retaining propane, ike ịsa ahụ na mposi ipuiche,, ma ọ bụ frameworkPER Iweghachi turbines, ngwa, na ime akụkụ nakwa dị ka towing mmemme. Nwere ndị mmadụ n'otu n'otu na-eme ahaziri van tọghatara. Career Skills Requirement Check or analyze function of pieces or systems to ensure …
Machine Feeders Ma Offbearers Job Description / Ọrụ Na Ibu Ọrụ Sample
Zụọ onunu n'ime ma ọ bụ wepu ngwaahịa site na ngwaọrụ ma ọ bụ ụdị na-bụ akpaka ma ọ nọgidere na-enwe site na ndị ọzọ ọrụ. Job Skills Need Check supplies and items regarding defects, na ka obi sie conformance ka ụdịdị. Kwụsị ihe na mmiri si na ụdị na-na ngwá, na ebe ndị a na gwongworo, igbe ma ọ bụ conveyors, employing …
Cleaners Of ugbo ala na Equipment Job Description / Ọrụ Template Na Ọrụ
Saa ma ọ bụ autos na ndị ọzọ doro anya, usoro, na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ahu nagide ndị a components dị ka brushes mmadụ, mmiri , akwa, na hoses. Career Skills Need Areas that are inspect, ngwaọrụ, ma ọ bụ ugbo ala banyere ọcha, mbibi, na nnabata iji chọrọ ma ọ bụ polices. Clean, bechapu, ma ọ bụ ịgba ngwaọrụ ebe, ngwaahịa, ma ọ bụ ugbo ala, …
Diagnostic Medical Sonographers Job Description / Ọrụ Na-aza ajụjụ banyere Sample
Akụkụ okuku ume na Agwọ Technicians Job Description / Ọrụ na ibu ọrụ Sample
Inye ha ọgwụgwọ akụkụ okuku ume na idak ụzọ nke ndị dọkịta na akụkụ okuku ume na-agwọ ọrịa. Job Skills Need Utilize aerosol and respiration remedies inside the supply of breathing remedy or various oxygen gadgets or ventilators. Work na mpaghara tinyere kpọmkwem elekọta, ụmụaka ma ọ bụ neonatal elekọta, ma ọ bụ ọdachi ụlọ na ahịa, healing …
Pharmacy Technicians Job Description / Ọrụ Na ọrụ Template
Kwadebe ọgwụ ọjọọ n'okpuru a ọgwụ si n'ụzọ. mix, nwere ike gbakọọ, ịdabere n'ebe, aha, na ndekọ ichekwa na akụkụ ụfọdụ nke ọgwụ dị na ọgwụ na-arịọ. Job Skills Qualification Get replenish requests or created prescribed and authenticate that facts is not incomplete and exact. Nọgidenụ na kwesịrị ekwesị nchekwa na nchekwa ọnọdụ banyere ọgwụ. …
Technical Directors-Managers Job Description / Ọrụ na ibu ọrụ Template
Surgical Assistants Job Description / Ọrụ Na Ibu Ọrụ Template
Page 30 nke 99« First...1020«2829303132 » 405060...ikpeazụ »